Indlwana emangalisayo enamakamelo okulala angu-1 enomlilo ovulekile - I-Airbnb
Indlwana emangalisayo enamakamelo okulala angu-1 enomlilo ovulekile
Argyll and Bute Council, Scotland, i-United Kingdom
Endaweni eyingqayizivele esiqhingini esihle se-Seil, le ndlwana yangaphambili ye-slate-workers iziqhayisa nge-balcony yamanzi enendawo yokuhlala nokudlela enokubukwa kolwandle okumangalisayo futhi iyindawo ekahle kakhulu yeholide yokuhlola indawo..
Konke esitezi esiphansi le ndawo yokuhlala yokuziphekela inomlilo ovulekile kanye nokushisisa phansi. I-Smart Freeview TV, i-iPod doc ne-DVD player. Indawo yasekhishini inompheki kagesi, i-combi microwave/uhhavini, umshini wokugeza izitsha & umshini wokuwasha/i-umble dryer. Ikamelo lokulala linombhede olala abantu ababili oneshawa engaphakathi nendlu yangasese.
Indlwana itholakala phambi kwamanzi e-Ellenabeich (Scottish Gaelic: Eilean nam Beitheach, okusho ukuthi "isiqhingi sama-birchwood." yidolobhana elincane esiqhingini sase-Seil (i-Scottish Gaelic: Saoil) – isiqhingi esisempumalanga ye-Firth of Lorn, amamayela angu-7 (11 km) eningizimu-ntshonalanga ye-Oban, e-Scotland. Yidolobhana lakudala futhi yilapho izingxenye ze-Ring of Bright Water zithwetshulwe khona. I-Seil ingenye yeziqhingi zase-Slate.
Leli dolobhana lithola igama lalo elivela esiqhingini sangaphambili se-slate esiseduze nedolobhana, elibizwa ngokuthi i-Eilean nam Beitheach. Lesi siqhingi sacishe saba khona futhi igama laso manje liyigama lamanje le-Scottish Gaelic laleli dolobha.
Ngezinye izikhathi leli dolobha libizwa ngokuthi "i-Easdale" ngenxa yokuthi lisondelene nesiqhingi salelo gama. Emzaneni ungatholakala. I-Easdale Island iseduze ne-Ellenabeich futhi ixhunywe ngesikebhe somshayeli esivamile.
I-Ellenabeich yidolobhana elikhulu kunawo wonke eSeil Island lixhumene kahle nezwekazi yi-The Bridge phezu kwe-Atlantic, nayo exhumanisa ne-Oban. Yindawo ekahle kulabo abafuna okokuzithokozisa kokuhlala okuzolile nokuzolile kude nesiphithiphithi sedolobha.
I-Oyster Bar & Restaurant iyibhizinisi eliqhutshwa umndeni elitholakala emagcekeni kuphela kude nendlwana. Ibha inikeza ubhiya & utshwala obuhlukahlukene. Imenyu iyisidlo sonyaka futhi ngokuyinhloko isekelwe ekudleni kwasolwandle okunezithako ezishaya khona futhi ezithengiswa endaweni.
I-Seafari Adventures nayo itholakala emagcekeni ambalwa.
I-Seafari Adventures ingabasebenzisi bezilwane zasendle zasolwandle abanomkhumbi wama-RIB anamandla aklanyelwe futhi akhelwe ukuqinisekisa amathuba amaningi okubuka. Ukuvakasha kuhamba phakathi nosuku ngokuvakashela i-Gulf of Cor Imperreckan, ikhaya le-Whirlpool Yesithathu Kakhulu Yomhlaba. I-Porpoise, amahlengethwa nemikhomo idla emanzini kanye nezimvu eziningi kanye ne-otter ngezikhathi ezithile. Imvelo yabo yamahora amabili isethwe phakathi kweziqhingi eziningi endaweni. Baphinde bahlinzeke ngohambo losuku oluya e-Iona, e-Staffa nase-colony yase-Puffin besebenzisa UMBHEDE wabo wendlu eyakhiwe ngamapulangwe ne-Whirlpool Specials ukuze babone ama-Corlidayreckan Whirlpools ekusebenzeni kwabo kakhulu.
Hlola ezinye izinketho ezise- Argyll and Bute Council namaphethelo